TAXANAHA PREMIER LEAGUE:- Farxadii Liverpool, Niyad Jabkii Arsenal, Shaxda Kooxdii Xilli Ciyaareedkan Ugu Fiicanneyd EPL, Maca Salaameyntii John Terry Iyo Dhacdooyin Xiiso Leh – Kooxda.com
Home 2017 May Dib U Eegid, Ingiriiska, Taxanaha Bar/Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino TAXANAHA PREMIER LEAGUE:- Farxadii Liverpool, Niyad Jabkii Arsenal, Shaxda Kooxdii Xilli Ciyaareedkan Ugu Fiicanneyd EPL, Maca Salaameyntii John Terry Iyo Dhacdooyin Xiiso Leh
Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu Akhristayaal Meel Walba oo aad ku suganyihiin waa Mustafe Atam iyo Barnaamijkii usbuuclaha ahaa ee TAXANAHA PREMIER LEAGUE. Barnaamijkan ayaad aalaaba la socotaan maalinta isniinta ah usbuuc kasta oo horyaalka ingiriiska la ciyaaro.
Barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa Waxqabadka usbuucaas laga sameeyo horyaalka Ingiriiska, Rikoorada Laga Diiwaan Geliyo, Kulamada La Ciyaaro Iyo waliba Dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee la sameeyo Usbuucaasi.
Dhamaan kooxaha waaweyn ee horyaalka Ingiriiska ka dhisan ayaa maalintii axada aheyd ku damaashaaday guulo raaxo leh iyaga oo dhamaantoodba sadexda dhibcood gacanta ku dhigay. Hase yeeshee guulaha ay kooxahani gaareen way kala farxad badnaayeen qaarkooda kalena waxay wateen murugo iyo qalbi jab weyn.
Kooxda Liverpool ayaa galabnimadii axada waxay garoonka Anfeild ku qaabileen naadiga lagu naaneyso BORO xilli ay kooxda Reds gaartay guul taariikhi ah.
Sadex gool oo nadiif ah ayay Reds ku xaaqday dhigeeda Middlesbrough waxaana goolashaasi u kala ansixiyay xidigaha kala ah Gini Wijnadum, Philippe Coutinho iyo Roberto Firmino.
Guushan ay Liverpool ka gaadhay Boro ayaa la micno ah inay Liverpool raacdo tareenka Champions League iyaga oo xagaaga kasoo muuqan doona tartan weynaha qaarada Yurub.
Waa markii labaad oo mudo sideed sano ah ay kooxda Liverpool kasoo qeyb gasho tartankan Champions League.
Kooxda Arsenal ayaa xalay gaadhay guul aan uga dueaneyn guuldaro kadib markii ay Everton 3:1 ku muquuniyeen balse ay ka hareen tartanka Champions League.
Goolasha ay Arsenal ku garaaceen Everton waxaa u kala saxiixay xodigaha kala ah Hector Bellerin, Alex Sanchez iyo Aaron Ramsey sida ay u kala horeeyaan.
Waa markii ugu horaysay oo mudo 18 sano ah ay kooxda Arsenal ka qado kuraasta lagu qeybsado Europian Champions League iyaga oo markan calafkodu noqday inay ka qeyb galaan tartan yaraha qaardaa Europe ee Ueropa League.
Kooxda Arsenal waxaa kaarka guduudan looga taagay xidigooda Laurent Kosceilny kadib markii uu ku khaldamay garabka Everton ee Valencia, waxeyna ka dhigantahay inay Gunners xidigan waayi doonto Finalka FA Cupka kaasi oo ka dhici dona gegada Wembley.
Kooxda Chelsea oo usbuuc kahor xaqiijisay inay tahay horyaalka Ingiriiska ayaa galabnimadii axada waxey Stamford Bridge kusoo dhaweeyeen dhigooda Sunderland.
The Blues ayaa dhirbaaxo xun ku dhufatay Sunderland taasi oo iyaduna u dhaadhacday heerka labaad ee Championship-ka.
Tiro goolala 5:1 ah ayay Blues ku xasuuqday Sunderland waxaana goolasha u kala ansixiyay xidigaha kala ah Willian, Hazard, Pedro, iyo Michy Batshuayi(2).
Intaasi kadib ayaa kooxda Chelsea la gudoonsiiyay koobka horyaalka Premier League kaasi oo ay ku hantrrn 7 dhibcood oo saafi ah.
Sidoo kale waxaa isla kulankan lagu sagootiyay hogaamiyaha kooxda Chelsea iyo kabtankoodii mudada dheer ee John Terry.
Manchester Unied Vs Crystal Palace
Kooxda Manchester Unied ayaa iyaduna guul aysan ku dhibtoon ka gaadhay dhigeeda Crystal Palace balse nasiib xumo wali kooxda Man united waxay horyaalka dhameysatay iyada oo kaalinta lixaad ku dheggan.
Balse fursada ugu weyn ee shayaadiinta cas-cas ka saacidi karta inay Champions League ka qeyb galaan ayaa ah inay ku guuleystaan koobka Europa League oo ay Finalka la ballansanyihiin Ajax Amsterdam.
Goolasha ay Man Unted ku muquunisay dhigeeda Palace waxaa u kala ansixiyay xidigaha kala ah Josh Haropp iyo Paul Pogba.
Naadiga ka dhisan magaalada Manchester ee lagu naaneyso Sky Blues ayaa galabnimadii axada aheyd waxay gumaad aan geedna loogusoo gaban u gaysteen dhigooda Watford oo ay marti u ahaayeen.
Shan gool oo nadiif ah ayay Citizens ku khaarajiyeen Watford, waxaana goolashaasi u kala ansixiyay xidigaha kala ah Vincent Kombany, Seegio Aguero(2), Fernandinho iyo waliba Gabriel Jesus.
Harry Kane ayaa xilli ciyaareedkan ku guuleystay kabta dahabka ah ee gool dhalinta horyaalka ingiriiska kadib markii uu laba kulan oo isku xiga sadexleey dhaliyay.
Wadarta goolasha uu Kane kabtan ku hantay ayaa ah 29 gool.
Shaxdii Ugu Fiicnayd Horyaalka Ingiriiska Xilli Ciyaareedkan
Shaxda ugu fiican horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareed kasta waa lasoo saraa waxaana shaxdan aan idiin soo tabinayno soo saartay BBC Sport.
Kooxda Sanadka ee BBC sport waxaa kusoo baxay 9 xidig oo ka ciyaara kooxaha London waxaana shaxdan iska yeelatay kooxda Chelsea oo shan xidig ku leh, kooxda Tottenham oo 3 xidig ku leh iyo Arsenal oo hal xidig ku leh. Halka labada xidig ee soo haray ay kasoo kala baxeen kooxaha Mercyside.
Rikoorada Usbuucan Laga Diiwaan Geliyay Horyaalka EPL
Tottenham waa kooxda goolasha ugu yar qaabishay labadan xilli ciyaareed ee ugu danbeeyay horyaalka Ingiriiska.
Waa markii koowaad tan iyo 1979 ee ay kooxaha Arsenal iyo Man United labaduba isku mar seegaan kaalmaha loogusoo baxo Champions League.
Chelsea waa kooxda kaliya ee 30 kulan guul ka gaarta 38ka kulan ee horyaalka Ingiriiska.
Machester City ayaa markoodii ugu horaysay 7 xilli ciyaareed oo xiriir ah ku dhameystay afarta kaalmood ee ugu horeeya Premier League.
Waa markii ugu horaysay taariikhda horyaalka ingiriiska oo koox 75 dhibcood leh ay seegto Champions League.
Spurs waa kooxda 3aad ee 7 gool ka dhalisa kulan horyaalka ah iyaga oo banaanka ku ciyaaraya(Away Game). Waxaa sidaasi horay u sameeyay kaliya Not’rham Forest iyo Man United.
Peter Crouch waa xidigii ugu horeeyay ee Premier League ka dhaliya 50 gool oo madax ah.
Coutinho waa xidiga goolasha ugu badan banaanka xerada ganaaxa ka dhaliya tan iyo markuu Premier League kusoo biiray(15 gool).
Josh Harrop waa xidigii 100aad oo Gool u dhaliya kooxda Man united taariikhda Premier League.
John Terry ayaa kulankiisii 492aad oo Premier League ah u saftay kooxdiisa Chelsea, waana in kabadan xidig kastoo kale.
Man United ayaa usbuucan Safka koowaad kusoo gashay kooxdoodii ugu yareyd abid(22 sano iyo 284 maalmood cel-celis ahaan).
Xilli ciyaareedkan 18 Guulood-Waa rikoorka guulaha ee ugu xumaa ee ay Premier League ka gaareen kooxda Manchester United.
36Gool- Old Trafford waa garoonka goolasha ugu yar lagu dhaliyo xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska.
John Terry waa ingiriisi dhalad ah wuxuuna kooxda Chelsea kulankiisii koowaad u saftay October-08-1998 isaga oo bedel kusoo galay kulan ay kooxdiisu la dheelayso Astonvilla.
Kabtan JT wuxuu kooxda Chelsea u saftay guud ahaan 717 oo 492 kamid ah ay yihiin Premier League. Wuxuu mudadaasi kooxda Chelsea kula guuleystay 15 koob oo noocyo badan leh. Ninkan ayaa ah kabtanka ugu guulaha badan taariikhda Chelsea.
JT, Antono Conte, iyo tahabaraha Sunderland ee David Moyes ayaa ku heshiiyay in kabtanka lagu sagootiyo inuu garoonka ku jiro 26 daqiiqo kadibna la bedelo iyada oo tirada daqiiqadahaasi la micno ah lambarka maaliyadiisa. Kadib markii la bedelay ayay xidigaha kooxdiisa u istaageen saf isla markaana sacab ku maca salaameeyeen waxaa sidoo kale boodhadh waaweyn, qoraalo, sacab iyo hees isugu daray jamaahiirta Blues.
Halyeeyga Chelsea ayaa kadib markii kooxdiisa horyaalka la gudoonsiiyay saxaafada la hadlay wuxuuna yiri,
“maanta waa maalin kamidaha maalmihii ugu adkaa ee nolosheyda soo mara. Waxaan nasiib u yeeshay inaan lasoo shaqeeyo xidigo iyo tababarayaal cajiib ah, waana u mahad celinayaa mid kasta oo iyaga kamida”
Isaga oo hadalka sii wata ayuu halyeeygu yiri, “waxaan sidoo kale u mahad celinayaa xaaskeyga iyo caruurtayda oo safarkaas igu garab taagnaa. Taageerayaasha Chelsea; Shaki la’aan, Waxaad tihiin taageerayaasha uhu wanaagsan dunida. Wax kasta waad ii hurteen. Kor ayaad ii qaadayseen marka ay iga jiifto, magaceyga ayaad ku heesayseen anigoo qaabciyaareed xun ku jira oo waliba idin niyad jabiyay”
Ugu danbeyn kabtanka, hogaamiyaha iyo halyeeyga Chelsea ayaa hadalkiisa kusoo af-meeray, “Halkaan waan imaan doonaa maalin kale, aniga oo sanadaha soo socda kooxda taageeraya”
Jawaabtii usbuucii hore waa: Weyne Rooney waxaana saxay hal akhriste kaliya. Akhristahaasi ayaa kusoo galay Aliadan. Hambalyo Aliadan!
Hal-xiralaha usbuuca: Waxaan ahay xidig ku guuleystay Champions League, Premier League, FA Cup iyo Europa League, Waxaan kooxdeyda u saftay 717 Kulan. Sheeg Kumaan Ahay??
Filed in: Dib U Eegid, Ingiriiska, Taxanaha Bar/Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino
17 Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “TAXANAHA PREMIER LEAGUE:- Farxadii Liverpool, Niyad Jabkii Arsenal, Shaxda Kooxdii Xilli Ciyaareedkan Ugu Fiicanneyd EPL, Maca Salaameyntii John Terry Iyo Dhacdooyin Xiiso Leh”
c by c May 23, 2017 at 12:02 pm · Edit
John terry thanks
yahye May 23, 2017 at 7:37 am · Edit
Yusuf kenyawi May 22, 2017 at 9:25 pm · Edit
waa ciyaaryahaynka john Terry oo u ciyaaro chelsea mahadsanid
Abdirizak Ahmed May 22, 2017 at 8:57 pm · Edit
candhaf May 22, 2017 at 8:20 pm · Edit
waa Gerard elcapitanoLiverpool llaawi
deeq daacad May 22, 2017 at 6:01 pm · Edit
waaa captain john terry
mukhtar said May 22, 2017 at 5:54 pm · Edit
wa catein john terry
deeq daacad May 22, 2017 at 5:49 pm · Edit
waa captain john terry
Ahmed Mouze May 22, 2017 at 5:34 pm · Edit
Waa Jon terry
nugaal May 22, 2017 at 5:27 pm · Edit
waa jon terry cidakale wa ayo
save time May 22, 2017 at 5:12 pm · Edit
wa john terry
nuu cade May 22, 2017 at 5:08 pm · Edit
waa kabtan john terry
daud ali May 22, 2017 at 5:08 pm · Edit
Maazim May 22, 2017 at 5:05 pm · Edit
Dirir abdinasir mahad May 22, 2017 at 4:42 pm · Edit
Waa frank lampard
abdi ŔÀHMÀÀÑ May 22, 2017 at 4:41 pm · Edit
John Terry chelsea legend
cali adan May 22, 2017 at 4:35 pm · Edit
waxey ilatahay jhonterry dhamantot wuukugulestey ninkale ingiris ah kumawadakuyleysan